Fandraisan’ireo ankizin’ny fikambanana tamin’ny hetsika « Danse pour la paix » | Grandir à Antsirabe
Fandraisan’ireo ankizin’ny fikambanana tamin’ny hetsika « Danse pour la paix »
Ny asabotsy 10 martsa lasa teo, ny Alliance française teto Antsirabe dia noentanin’ny mozika sy ny dihy ! Nanomboka tamin’ny 3 ora tolakandro katramin’ny 6 ora, dihy no nandravaka ny sehatry ny Alliance, mpandihy izay avy eto Antsirabe avokoa.
Ny fihetsiketsehana dia nokarakarain’i Yushihiro Takata (mpilatsaka antsitra-po ao amin’ny CFAMA : Centre de Formation et d’Application du Machinisme Agricole), izay efa niara-niasa tamin’ny fikambanana nandritrin’ny fetin’ny noely 2017, izay nanolotra fanomezana ho an’ireo ankizin’ny trano fandraisana.
Tamin’ity hetsika voalohan’ny Madagascar – Joie de danse ity, fifaninanana mandihy tsiroaroa no natao : Hip-hop, break, krump, dancehall… hita tao daholo ireo karazana dihy ! noho ity fiaraha-miasa ity dia afaka nampiseho ny talentany ihany koa ireo ankizy tamin’ny alalan’ny dihy sy hira izay efa fantatry ny rehetra « Grandira », niarahana tamin’ny DJ Maztouky Sound, mpanabe ato amin’ny fikambanana.
Ireo mpijery dia nisitraka ihany koa ny fampisehoana « danse contemporaine » niarahana tamin’i Master Jah, izay nanome ihany koa fampianarana io dihy io nandritry ny herinandro.
Nisy ny loka nozaraina tamin’ireo telo voalohany :
Loka voalohany : 100 000 Ar
Loka faharoa : 30 000 Ar
Loka fahatelo : 10 000 Ar
Miisa telo ireo mpitsara ny fifaninanana, izay mpandihy efa fanta-daza : SAI H, Thierry de Master jah sy Bboy Noumih. Ireo ekipa nivoaka mpandresy tamin’iny hetsika iny dia nahitana an’i TAZ sy Bibzaza.
Mpandresy ihany koa tamin’iny fotoana iny ireo ankizin’ny trano fandraisana ! 56 000 Ar ny vola azon’ny fikambanana izay azo tamin’ny fametrahatra boatin-drakitra teo amin’ny trano hevan’ny fikambanana izay nisy an’ireo ekipa. Yushihiro ihany koa dia nanome Akanjo, kiraro sy fitaovam-pianarana. Ny ekipa mpiseraseran’ny Grandir à Antsirabe no niakatra teo ambony sehatra nisaotra sy nankasitraka an’i Yushi sy ireo tonga rehetra tamin’ny anaran’ireo ankizy sy ny ekipa rehetra.
Faly ny fikambanana nizara iny fotoam-pifaliana iny tamin’ireo mpandihy sy ireo mpanatrika ! fankasitrahana lehibe ho an’ny Alliance française Antsirabe sy ho an’i Yushihiro Takata tamin’ny fandavan-tenany manoloana ireo ankizin’ny lalana sy ny fikambanana Grandir à Antsirabe.
Ny mombamomba an’i Yushihiro, mikarakara ny hetsika :
Iza moa ianao ?
Yushihiro Takata no anarako, 28 taona aho ary avy any Japon no fihaviako. Mpilatsaka antsitra-po ao amin’ny fikambanana CFAMA aho, mpampiofana sy mpanara-maso ny kalitao.
Inona no nahatonga anao nikarakara iny hetsika iny ?
Antony roa no nikarakarako iny hetsika iny : voalohany dia amin’ny fotoana ohatr’izao no ahafantarana ireo tanora mpandihy eto Antsirabe indrindra eo amin’ny sehatry ny Hip-hop izay hita fa tena ankafizin’ireo taora. Fa ihany koa te hnampy ireo ankizin’ny lalana eto Antsirabe aho, tiako mba afaka maneho hevitra ko aizy ireo amin’ny alalan’ny hira sy ny dihy.
Inona no antony nisafidiananao indray hiara-hiasa amin’ny Grandir à Antsirabe ?
Nosafidiako ny fiaraha-miasa aminareo satria hitako ny fahavitrian’ny ekipa sy ny fahaiza-manao eo amin’ny fandraisana an-tanana an’ireo ankizin’ny lalana. Tiako ihany koa ny tetik’asa fampiantranoana ireo ankizy. Faly aho mahita fikambanana ohatry ny anareo izao.
Ahoana no nahafantaranao ny fikambanana ?
Tamin’ny taona 2016 no nahafantarako ny fikambanana tamin’ny alalan’ny tranon-kalan’ny fikambanana Grandir à Antsirabe. Nankany amin’ny biraon’ny fikambanana aho avy eo ary nihaona tamin’ireo ekipa. Ary farany dia nandray anjara tamin’ny iray amin’ireo hetsika atao an-davanandro, DanseLaRue.
Non classifié(e)	Alakamisy 22 martsa 2018 : fitokanana ny trano fan…